SIDEE LOO QUUDIN KARAA ORCHID: DIB U EEGIDA QALABKA UGU FIICAN, TUSAALE AHAAN, POKON, JOY, IYO WELIBA INTA JEER EE AAD BACRIMIN KARTO IYO NOOCA DOORANAYA - ULAHA, DAREERAHA AMA XOOGGA? - SOOSAARKA DALAGGA
Talooyinka beeraha ubax: sida loo quudiyo orchid? Faahfaahin guud ee qalabka ugu wanaagsan iyo sida loo isticmaalo
Orchid waa warshad cajiib leh oo dabacsanaan kara qof walba. Si kastaba ha ahaatee, quruxdaas waxay u baahan tahay dadaal aad u weyn. Waxaa lagama maarmaan ah inaad bixiso dareen badan, si aad u isticmaasho tamar badan si aad uhesho orchid caafimaad iyo midab leh. Laakiin wali ma jirto caawinaad dheeraad ah. Caawimadani waa ubax bacriminta ah. Maqaalka waxaan ku siineynaa liiska Bacriminta ugu fiican, kuu sheegi kara kuwa ugu haboon, sharax farqiga u dhexeeya dufanka, dareeraha iyo qandhada, oo ku siin talooyin ku saabsan waxa iyo sida loo quudiyo dhirta, haddii aad u baahan tahay inaad sameyso xilliga dayrta ama gu'ga iyo haddii aad codsan karto isla maalgelinta midabada kale.
Maxay quudin kartaa?
Si loo quudiyo dhirta, muhiim maaha inaad iibsato lacag qaali ah.. Waxaad karisaa bacriminta guriga.
Waxaad ka heli kartaa warshad noocaan ah meel kasta oo guri ah. Si aad u quudiso orchids waxay u baahan tahay in la gooyo 30 ml oo casiir ah 1500 ml oo biyo ah.
Peel laga helo rummaan iyo liin
50 g oo qalooc ah ku shub 1000 ml oo biyo ah oo jeermi 24 saacadood. Ka dibna isticmaal dhar asal ah.
1 kiniin ah ayaa lagu qasi jiray 1000 ml oo biyo ah. Halabadani waxay ku haboon tahay in lagu buufiyo geedaha. Nidaamkan wuxuu gacan ka geysan doonaa xoojinta nidaamka difaaca.
20 garaam oo sonkor ah ku shub hal litir oo biyo ah. Biyaha soo baxa xal hal mar bishii.
Rux ilaa 20 ml oo saliid ah 1000 ml oo biyo ah. Walaaq ilaa saliid lagu burburiyo gogo 'yar. Isla markiiba (haddii kale saliiddu waxay mar kale isu soo ururineysaa hal mar oo kale) ka dib markii la marsiiyo, biyaha ubaxa.
Caawimaad! Haddii orchid Blooms sanadkiiba hal mar, markaas xalku waa in lagu daraa hal mar sannadkii. Haddii ubbooyinku marar badan ku duubaan, markaa waxaad u baahan tahay inaad dharka u sameyso 30 maalmood oo kasta.
Bacriminta Tani waxay ka ilaalin doontaa dhirta ka soo cayayaanka, iyo sidoo kale waxa ay ku quudin kartaa qaybaha raadadka, oo ay ku jiraan potassium, calcium iyo fosfooraska. Si aad u diyaariso qalabkan cajiibka ah, waxaad u baahan tahay inaad qaadato 50 garaam oo dambas la jajabiyey oo ku shub hal litir oo biyo ah karkaraya. Ku buufin isku dar ah todobaadkii, kareyso marmar. Inta lagu jiro xilliga diiran waxaa lagama maarmaan ah in la isku daro isku darka labadii toddobaadba mar, iyo qabow - hal mar bishii.
Sidee iyo waxa la siinayo orchids guriga, halkan ka akhri, iyo waxa ay tahay biyaha toon ah ee bacarimiska iyo marka ay fiican tahay in la isticmaalo, waxaad ka baran doontaa waxyaalahan.
Inta badan, dharka sare ee noocan oo kale ah waxaa loo isticmaalaa in lagu dheereeyo muddada ubaxyada ee orchid. Codso rooti "cunto".
Halabuurka waxaa ka mid ah waxyaabaha soo socda ee waxtarka leh:
Dhalada dhalada waxaa ku jira khariidad qaboojiye. Sida ku qoran tilmaamaha, si aad u dalbato bacriminta "Pokon" waxaa lagama maarmaan ah in lagu milo 5 ml 1 l oo biyo ah oo la daahiriyey. Bacrimiyo laba jeer bishii si joogto ah. Qarashka daawada ayaa ah 220-250 rubles.
Qalabka bacriminta waxaa ka mid ah nafaqooyinka iyo enzymes.. Inta lagu jiro muddada isticmaalka daroogada, koritaanka dhirta oo kor u kacda, nidaamka xididka ayaa bilaabmaa inuu horumariyo dhakhso. Xalkani wuxuu caawiyaa orchids si dhakhso ah oo si wax ku ool ah ula tacaala xanuunka iyo dulinka.
Sidoo kale, qalabka waxaa si weyn loo isticmaalaa ka dib marka lagu bedelo ama isbeddel ku yimaado xaaladaha xabsiyada. Si aad u isticmaasho Japanese Blue, waxaad u baahan tahay in aad jarjartid qaybta sare ee daboolka, ka dibna dhalada ku qoorta qoorta adoo qoorta ku shub bacriminta si toos ah ciidda. Kharashka quudinta waa kala duwan yahay inta u dhaxeysa 150-170 roon.
Daawadani gabi ahaanba waa la isku-buufin karaa biyaha, ma ku jiraan chlorine. Waxaad u iibsataa budada cad. Hawlgalkeeda ugu weyni waa nafaqada dhirta. In ciidda waxaa la keenaa in view uumi biyo. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah diyaargarowga ugu xoogan ee joogitaanka potassium iyo fosfooraska. Qiimaha bacriminta waa 100 riwaayad halkii 1000 garaam.
Qalabka waxaa loogu talagalay ma aha oo kaliya orchids, laakiin sidoo kale dhirta sanadlaha ah iyo gaaban. Laakiin sidoo kale Qoyska Orchid waa mid qumman. Hawsha ugu weyn ee JOY waa fidinta xilliga ubaxyada iyo sameynta burooyinkeeda waaweyn oo midab leh. Dila 5 ml ee daroogada ee 1000 ml oo biyo ah. Waxaa la isticmaalaa laba jeer bishii. Kharashka qiyaasta - 100 rubir.
Qalabkani wuxuu kobciyaa koritaanka xididada iyo ubaxyo badan oo soo noqnoqda, iyo sidoo kale kordhiya howlaha ilaalinta orchids. Waxay ka caawisaa ubaxa si ay u noolaadaan xaaladaha walaaca, iyo sidoo kale ka ilaaliya cudurada. Qalabku kuma daro sunta.
Tilmaamaha isticmaalka zircon ee soo socda:
qallajinta gooynta iyo abuurka;
ku buufin dhirta.
Waxaad ubaahan tahay in aad qoyso hal ilig (1 ml) 10 litir oo biyo ah. Kharashka caanaha dhalada ah waa 13 riwaayad.
Dhammaan faahfaahinta ku saabsan diyaargarowgaan loogu talagalay dhirta quudinta, halkan ka akhriso
Bacriminta Tani waxaa loo tixgeliyaa inay noqoto mid adag, maadaama ay ku haboon tahay bacriminta ciidda iyo quudinta kaliida nidaamka xididka. Inta lagu jiro isticmaalka, beeralayda waxay xusuusinayaan horumarin degdeg ah oo ah orchids., iyo sidoo kale xitaa ka badan ubax iyo ubax dheeraaday. Daroogadu waxay soo saartaa difaacida xaalado kala duwan oo dhanka deegaanka ah. Si aad u diyaariso bacriminta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu milmo 1 ml oo ah "Biyo Dheer" 10 litir oo biyo ah. Waxay u qalantaa 150 rode.
Waxay leedahay ficillo badan oo kala duwan: laga bilaabo kordhinta hawlaha ilaalinta si loo hagaajiyo ubax. Samee bacriminta digsiga. Gaar ahaan waxay u baahan yihiin xididada quudinta sida. Si aad u isticmaasho hal mar waxaa loola jeedaa 1 litir oo biyo ah. "Fed" orchid 1 mar laba toddobaad. Asaasida amino ee ku jirta halbeegga wax soo saarka, hagaajinta habka sawir-qaadis. Qiimaha daroogada ayaa u dhaxaysa 50 roon ilaa 300 ml.
Maaddooyinka ugu firfircoon ee firfircooni waa maadooyinka macdanta ah iyo walxaha humic.
Intaa waxaa dheer kuwaas Waxyaabaha kale ee maaddooyinka kale ayaa lagu daray.:
Waa muhiim! Si kastaba ha ahaatee, daawadani waxay leedahay hal dhibaato weyn: qaabka saxda ah ee laguma xusin baakidhka. Iyo waxyaabo badan oo ka mid ah qodobada qaarkood waxay waxyeelleyn karaan orchid. Si aad u diyaariso bacriminta, waxaad u baahan tahay inaad ku shubto 0.05 litir oo badeeco leh litir biyo ah. Isticmaal maro laba jeer bishii.
Dhammaan talooyinka beerta ee ku saabsan sida loo isticmaalo Agricola ee orchids waxaa laga heli karaa maqaal kale.
Badanaa, beeraleydu waxay u isticmaalaan si ay u dhaqaajiyaan korriinka iyo kordhinta xajmiga burooyinkooda, iyo sidoo kale ka dib markaad transplanting iyo bedelida meesha dheriga.
Kadib isticmaalka daroogada, natiijooyinka soo socda waa la ogaanayaa.:
kobaca iyo horumarka buuxa;
iyo ubaxyo faro badan iyo cudurro waaweyn;
korodhka hawlaha ilaalinta.
Diyaarinta 0.05 litir, ku shub 10 litir oo biyo ah. Qiimaha daroogada - 200-210 rubles.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan bacriminta orchid halkan.
Goorma iyo imisa jeer bacrimiya?
Ka hor intaadan sameynin daroogada waxaad u baahan tahay inaad barato arrimaha soo socda.: Xilliga, xaddiga ciidda iyo xaaladda. Bacriminta waa lagama maarmaan marka ubaxu uu ogaaday isbedeladan soo socda ee horumarinta orchid:
Dareemayaasha kala duwan iyo fungus ayaa u muuqday substrate ah oo ku quudiya geedka laftiisa.
Mararka qaar noolaha noocan oo kale ah ayaa ku ururaya sababtoo ah bacrinta joogtada ah. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad si adag u hoggaansanto tilmaamaha isticmaalka quudinta. Sidoo kale hoos u dhig qiyaasta dakhliga qaangaarka dadka waaweyn.
Ka dib markii la geliyo ciidda guriga. Geedka noocaas ah wuxuu u baahan yahay bacriminta nitrogen.
Haddii ay dhacdo in dhulka la jilciyo xumbo ama walxo kale oo dabiici ah.
Xilliga dayrta-xilliga qaboobaha, waxaad u baahan tahay inaad bacrimiso mid ama laba jeer bishiiba. Tan iyo markii loo maleynayo in ay tahay waqti nasasho, orchid si tartiib ah ayuu u koraa, tani waxay u baahan tahay bacrimin yar.
Marka bilawga ah ee quudinta guga waa in kor loo qaado ilaa saddex jeer bishii. Guga waa wakhti ay soo jeedaan, sidaa daraadeed dhammaan geedi socodka ayaa xawaareynaya.
Waa muhiim! Dhammaadka xagaaga, bacarimisku mar kale ayaa la dhimay marmar bishii.
Miyuu suurtagal ah in la isticmaalo badeecooyin loogu talagalay geedaha kale?
Marka la eego dharka, orchid waa gabi ahaanba aan la qabin.. Sidaa darteed, waxaa suurtogal ah in bacriminta dhirta xitaa la diyaariyo oo loogu talagalay midabyo kale. Waxa ugu muhiimsan ee kiiskan waa in si taxaddar leh loo baaro ka kooban. Alaabta waa in ay ku jiraan potassium, nitrogen iyo fosfooraska iyada oo aan dhicin.
Waxay u qaybsan yihiin kooxo iyadoo ku xiran hadba heerka ay joogteynayaan. Waxaa jira noocyada soo socda.
Tani inta badan waa laba marxidhibboor. Diyaari bacriminta noocan oo kale ah adoo kala gooyey fosfatada dabiiciga ah ee fosfooriga ah. Daawooyinka noocan oo kale ah waxay ku haboon yihiin codsiyada iyo xididada labadaba. Si kastaba ha noqotee, si loo gaaro natiijooyinka ugu badan, beeralayda ubaxa waxaa lagula talinayaa inay isticmaalaan qalabkan tandem.
Bacriminta noocan oo kale ah waxaa lagu gartaa xulasho taxadar leh ee nafaqooyinka. Caadi ahaan sida dharka caynkaas ah waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo ubax oo ka dhiga wax badan. Ku darso bacriminta ulaha leh inta lagu jiro koritaanka firfircoon ee dhirta..
Tirada sticks waxay ku xiran tahay dhexroorka dheriga. Inta badan awoodda, bacriminta ka badan. Qoryahaas waxaa si fudud loo geliyaa dhulka, waana in la waraabiyaa. Waa lagama maarmaan in la bedelo bacrimin saddexdii biloodba mar.
Bacrimintaas ayaa ah kuwa ugu caansan sababtoo ah sahlanaanta isticmaalka iyo maqnaanshaha khatarta ah in ka badan ee xubno. Nafaqada dareeraha ah ayaa sidoo kale loo qaybiyaa qaybo hoose:
Potashka. Ka qaybqaado hagaajinta muuqaalka orchids, kobcinta kobcinteeda iyo saarista burooyinkeeda.
Phosphoric. Sida caadiga ah waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo ubax.
Nitrogar. Waxay hagaajinaysaa koritaanka qaybta cagaaran ee ubaxa.
Waxaad ka heli doontaa maqaalkan ku saabsan waxa Bacriminta loo baahan yahay si ay dhirtu u bararaan oo u siiyaan ilmaha, oo halkan ka akhri sidaad iyo sida loo bacrimiyo orchid inta lagu jiro ubax.
Dooro daroogada ugu fiican ma fududa. Mid waliba wuxuu wax ku ool yahay habkiisa. Haddii aad dooratid alaab guri, waxaa fiican inaad bixiso doorasho saliideed. Qalabka dukaanka, Zircon waa kan ugu caansan. Faa'iidada ugu weyni waa maqnaanshaha walxaha sunta ah. Waxaa loo tixgeliyaa bacriminta isku dhafan, sidaa daraadeed iyada oo gacan ka heleysa Zircon dhibaatooyin dhowr ah oo leh orchid la xalin karo.
Faahfaahin guud oo ku saabsan habka ugu caansan ee bacariminta, soosaarka iyo beerashada orchid guulaysta waxaa laga heli karaa boggayaga internetka. Akhri daawooyinka sida: Fitoverm, Aktara, Appin, Bona Forte, Fitosporin, Cytokinin Paste, Succinic acid iyo Vitamins.
Dabcan, dhaymada ayaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo xaaladda geedka. Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtagal ah in la ogaado saameyn sax ah oo keliya isticmaalka haboon, raacitaanka tilmaamaha saxda ah. Haddii aad ku dhaafto bacriminta, markaa waxaad si buuxda u burburin kartaa orchid.